Prof. Geedi oo hogaaminaya wafdiga golehiisii wasiirada ee garabka Jowhar ayaa soo Gaarey Muqdisho
Buluugleey, November 06, 2005
Prof. Cali Maxamed Geedi oo uu hogaaminayo dhamaan wasiiradii ka joogey magaalada Jowhar ayaa soo gaarey magaalada Muqdisho. Wafdigaas oo soo raacay diyaarad uu leeyahay Jaamac Buluug oo ah nuuca qaada Jaadka ayaa ka soo degey garoonka Cisileey, una sii gudbey Hotel Ramadaan oo ku yaal waqooyiga Muqdisho, isaga oo doonaya inuu Muqdisho ku kulmiyo golehiisa wasiirada oo u kala jabay labada garab.
Prof. Geedi ayaa laga sugayey wakhti dheer inuu soo gaaro Muqdisho si uu u mideeyo golahiisa wasiirada oo u kala jabay Muqdisho iyo Jowhar. Waxey imaanshihiisa xoojineysaa kulan guud oo dhexmara wasiiradiisa fikirka ku kala tegey. Dadaalka weyn ee uu hadda prof. Geedi uu ugu jiro isku keenida golahiisa wasiirada ayaa ah mid uu aad ula soo daahay kadib markii hogaamiye kooxeedyada Muqdisho ay ka quusteen xal ay la gaaraan Col. C/llahi, dabadeedna ay go'aansadeen iney ku dhawaaqaan iney burburtay dowladii loogu tala galay dib u heshiisiinta ee IGAD ay ku soo dhistay dalka Kenya.
Ujeedada Geedi ayaan marnaba ahayn mid la isku haleyn karo isaga oo dabada la galay dagaaloogayaasha Jowhar sida Col. C/llahi Yusuf iyo Maxamed Dheere. Dad badan oo Soomaaliyeed ayey hadda maskaxdoodii ka baxday sida la isugu haleyn karo dadaalka uu doonayo Prof. Geedi. Waxaa laga filayey Prof. Geedi oo aan ahayn dagaalooge inuu ka istaago meel dhexe xarig jiidka dagaal ee u dhexeeya dagaaloogayaasha Muqdisho iyo Jowhar oo ay huban tahay inuu dhexmarayo dagaal qorsheysan oo Itoobiya ay ka dambeyso.
Waxaa lagu macneeyey imaatinka Prof. Geedi mid ay garabka Jowhar ku doonayaan iney ku muujiyaan iney Muqdisho ku shireen oo keliya si loo geliyo warbaahinta caalamka. Dhinaca kale waxaa socdey dadaal lagu doonayo in lagu soo jiito xildhibaanada loo arkayo iney dhuuniraacato yihiin si loo badiyo liiska ka soo jeeda garabka Jowhar. Waxaa waayahan socdey wadahadalo dhinaca telefoonada oo xubno badan oo jooga Muqdisho lagu gorgorinayey qiimaha ay joogaan haddii ay doonayaan iney u soo leexdaan dhinaca Jowhar. Wadahadaladaas dadka lagu jilciyey ayaa la dhowrayaa inuu soo dhameystiro Prof. Geedi.
Safarka Prof. Geedi uu ku yimid Muqdisho ayey dad badan oo ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed u arkaan hadda midaan waxtar lahayn waayo Col. C/llahi Yusuf ayaa ku guuleystey inuu marar badan hakiyo socdaalka Geedi waqti uu wax badan qaban lahaa. Korneyka ayey u qorsheysneyd oo la sugayey inuu soo diro Geedi kadib markii uu sida uu rabey u gaarsiiyey meesha ay hadda arrintu gaartey oo aan wax ka qabad lahayn.
Col. C/llaahi ayaa cabsi weyn ka muujiyey inu Prof. Geedi uu ku cidleeyo Jowhar, keligiisna uusan Muqdisho ka dhigan xaruun. Cabsida ugu weyn ee uu Cabdullahi qabo waa in Prof. Geedi uu bilaabo dadaal dhexdhexaadina ee uu la furo hogaamiye kooxeedyada jooga Muqdisho, taas oo wax badan ka bedeli karta fikradiisa. Sidoo kale waxaa aad looga ilaalinayey Geedi iney isku xirmaan Xuseen Caydiid oo siyaasadiisu ay wejiyo badan tahay. Prof. Geedi ayaa wuxuu ahaa nin xaga fikirka aad ugu dhowaa Janaraal M.F. Caydiid, lana fili karo haddii uu siyaasadiisa wax badan ka bedelo inuu ka helo taageero xoogan koofurta Muqdisho.
Ilaa iyo hadda ma Cadda dhanka uu u dhaqaaqi doono Geedi oo ah ama inuu dhexdhexaadnimo ku soo noqdo ama inuu u guryo noqdo garabkiisa Jowhar. Dad badan waxey walaac ka muujiyeen in Geedi uu ku sumoobey siyaasada dagaaloogayaasha Jowhar, rajada laga qabo inuu ka caafimaado suntaasna ay adag tahay. Aqoon yahanka Soomaaliyeed ayaa saadaalinaya in Prof. Geedi uu dhumiyey fursad uu ku noqon lahaa hogaamiye ummadda Soomaaliyeed ku leh maamuus kadib markii uu la iman waayey dhaqan ku saleysan fikradiisa oo ka duwan kuwa ay ku dagaalamayaan dagaaloogayaasha Soomaaliyeed. Ma jirto sadaal dhow oo tilmaameysa in Prof. Geedi uu dib u saxayo mariinkii qaldanaa ee uu u soo qaaday siyaasada dib loogu heshiisiinayo Soomaalida.